Warbaahinta Bulshadu waxay ku saabsan tahay fulinta | Martech Zone
Tuesday, April 22, 2008 Sabtida, Oktoobar 18, 2014 Douglas Karr
Markii aan la shaqeynayay macaamiisha suuqgeynta tooska ah, qaaciidooyinka si fudud ayey u fududaan jireen. Jaantus cidda iyo meesha ay macaamiishaadu ku nool yihiin, ka dibna u hel rajo sida iyaga oo kale ah. Ful, cabir, sifee - ka dib mar kale wax walba ku celi.
Warbaahinta Bulshadu way ka duwan tahay, lagana yaabee taasi inay tahay sababta ay shirkaduhu uga cabsadaan. Natiijooyinka maaha kuwo la saadaalin karo. Badanaa ma jiraan tusaalooyin yar ama aan lahayn xaq u sameeyey mana jiraan fursado lagu Macnaha in yar si loo arko sida inta kale u falceliso.
Warbaahinta Bulshada waa wax shirkaddaadu u baahan tahay inay ku quusato madaxa hore, ka dibna ay falceliso oo ay la guurto dhagaystayaasha. Haddii aad ku kalsoon tahay alaabadaada iyo adeegyadaada oo aad runtii rabto inaad la xiriirto dadka badan, markaa ma jirto fursad ka wanaagsan sida maanta oo kale. Shirkadaha gadaal u taagan ee sugaya, ama ka xun - iyagoo isku dayaya inay koobiyeystaan ​​kuwa kale - ayaa ah kuwa qasaaray.
Paul at Buzz Marketing wuxuu qoray boostar weyn maalin dhaweyd, Suuq lagu beddelo Habdhaqanka Macaamiisha, ee aan loo beddelin Dabeecadaha. Dhaqanka macaamiisha waa la saameyn karaa, laakiin shirkaduhu waa inay awoodaan inay duck, dhaqaaqaan oo garaacaan markay u baahdaan. Ciyaar chess ma ahan, ee waa dagaal waddo.
Macaamiisha ayaa kugula tartamaya ay cowska, adiga ma lihid. Markaad guuleysato, waad guuleysaneysaa weyn. Laakiin haddii aadan imaan ama, kaaga darane, waxaad ku luminaysaa dagaalka hortiisa rajooyinka kale iyo macaamiisha, waxaad tagaysaa adigoo faro madhan.
Marka jihada dhankee ayaad u qaadaysaa dheriga dahabka? Si fudud haddii loo dhigo, ma aad raadisid jihada - waxaad kaliya bilaabi doontaa wadada. Warbaahinta Bulshadu waxay ku saabsan tahay wadada safarku ka yar yahay, ma ahan waddada loo garaacay dhimashada.
Maxaad ka qabanaysaa arrintaas?
Immisa shabakado bulsheed oo adiga iyo shaqaalahaaga aad ka qayb gasho oo ay dad kale hoggaaminayaan (xitaa tartanka)? Mid kasta shabakadaha gobolka?
Immisa waxyaabo cusub oo bulsheed ayaad ku tijaabineysaa. Shirkadaadu ma leedahay Twitter koontada? A Youtube Kanaalka?
Immisa munaasabadood oo goboleed ah ayaad ka qaybgashaa… ama ka fiican… ma hoggaamisaa? Ma u keentaa khubaro kale inay ka caawiyaan macaamiishaada meelaha aanad khibrad u lahayn?
Shirkaddaadu ma leedahay blog? Macaamiishaadu ma qabtaan? Shaqaalahaagu ma qabtaan? Maxaad u garan weyday?
Waa tan mid fudud oo la isku dayi karo. U samee koonto Twitter shirkaddaada waxaadna leedahay liiska dadka kormeera. Mar kasta oo aad wax ku darto bartaada, otomatig ugu dhawaaq ogeysiiska Twitter. Waxaa laga yaabaa inaad la yaabto inta qof ee xiisaynaya!
Jooji qorshaynta. Tani maahan wax aad sugi karto inaad ku abuurto qorshe qumman… tani waa wax aad u baahan tahay inaad ku fuliso. Maanta. Hadda.
Verizon: Fadlan Jooji Waallida
Apr 22, 2008 at 9: 49 PM
Si kale haddii loo dhigo - ku soo dhawow adduunka cusub ee khalkhalka badan ee suuq-geynta dhaqsaha badan leh, halkaasoo “metrik” -ka cusub uu ku soo laabanayo tijaabadii!
Apr 23, 2008 at 8: 22 PM
Xaqiiqdii waa wax qasan - laakiin waxaan u maleynayaa in si wanaagsan loo maareyn karo loona hagi karo waqti. Waxaan u maleynayaa in dhibaatada shirkadaha ugu badan ay qabaan ay tahay inay rajo ka qabaan waxa dhici doona.
Marka ugu horeysa ee ay bilaabaan, himilooyinkaas badanaa waxay ka duulaan daaqada oo waqtiga kala sooca ayaa ku dhaca. Haddii shirkaduhu ay marka hore 'tijaabin karaan biyaha' oo ay fiiro gaar ah u yeeshaan jihada ay u socdaan, waxaan aaminsanahay inay heystaan ​​fursad aad u wanaagsan oo ka hortagga musiibada iyo soo dhaweynta fursadda.
Farxad Steve! Wanaagsan inaan ku arko!